एक–अर्काबाट सिक्ने कुरा- विचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ४, २०७४ रिचार्ड कफम्यान
सुन्दा स्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर जब हाम्रा विद्युत क्षेत्रहरूको कुरा आउँछ, नेपाल र न्युयोर्क राज्यबीच साझा समस्या र अवसर छन् । हामी दुवैकहाँ ठूला विद्युत उत्पादन अधिकांश मानिस बसोबास गर्ने स्थानबाट टाढा गरिन्छ ।
हामी दुवै प्रसारण लाइन निर्माणको चुनौतीसँग जुध्दैछौँ । र हामी दुवैले २१ औँ शताब्दीको विद्युत ग्रिड निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा झैँ न्युयोर्क राज्यमा पनि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको समस्याका कारण लगानी भित्र्याउन चुनौतीपूर्ण छ । नेपाल र न्युयोर्क दुवै ठाउँमा छिमेकी अर्थतन्त्रको दाँजोमा विद्युतको लागत उच्च छ । यसले गर्दा नागरिकका लागि तुलनात्मक बेफाइदा र चुनौती दुवै उत्पन्न भएको छ । न्युयोर्क जस्तो समृद्ध ठाउँमा पनि १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई बिजुली बत्तीको बिल तिर्न हम्मे परिरहेको छ ।
न्युयोर्क र नेपालले अब ऊर्जाको क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा काम गरेर हुँदैन । प्रविधि द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सोलार, ब्याट्री र विन्डको मूल्य घट्दो छ । पहिलेभन्दा धेरै व्यक्ति, कम्पनी र समुदायले आफ्नो ऊर्जा निर्भरता र गुणस्तरप्रति नियन्त्रण जमाउन चाहिरहेका छन् । विद्युतीय सवारी साधनहरू अब काल्पनिक विज्ञानमा मात्र सीमित नभएर भविष्यका स्वच्छ यातायात साधनसमेत हुन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ । यस यातायात क्रान्तिलाई समर्थन गर्न र हाम्रो समुदायका घर तथा व्यवसायमा विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि हामीलाई त्यस्तो विद्युत ग्रिडको आवश्यकता छ, जसले धेरैभन्दा धेरै विद्युतमात्र प्रदान गर्दैन, तर जो लचिलो र बुद्धिमान समेत छ । त्यसो भएमा ग्राहकले घाम लागेको वा नदीमा पानी भएको बेलामात्र नभई आफूले चाहेको बेलामा विद्युत उपभोग गर्न सक्छन् । आज हामीसँग त्यस्तो ग्रिड छैन । नेपाल र न्युयोर्कमा आज पनि १९ औँ शताब्दीको आधारभूत संरचना छ । पुँजी र ऊर्जाका हिसाबले यो संरचना अप्रभावकारी छ । विद्युत जगतका अग्रज तथा आविष्कारक थोमस एडिसन र निकोला टेस्ला अझै जीवित भएका भए उनीहरूले हाम्रो अहिलेको ग्रिड संरचना सजिलै चिन्ने थिए ।
आज र भोलिको हाम्रो ऊर्जा आवश्यकता पूर्तिका लागि अब परिवर्तन गर्ने समय आएको छ । नेपाल र न्युयोर्कलाई प्रभावकारी, लचिलो र बुद्धिमान खालको नयाँ ग्रिड निर्माण गर्ने मौका छ ।
नयाँ पुस्ताको ऊर्जा प्रणालीको सिर्जना गर्न हामीले गर्नुपर्ने काम यसप्रकार छन् :
१. बलियो र पारदर्शी बजार । मूल्य निर्धारण र विद्युत व्यापारका लागि बजार भएन भने स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूलाई जलविद्युत र अन्य उत्पादन आयोजना विकास गर्न र निर्यात साझेदारसँग व्यापार गर्न कठिन हुन्छ । पारदर्शिताले जोखिम कम गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउने हुँदा मूल्य घट्छ । विद्युत पनि आखिर अन्य वस्तुजस्तै हो, जसको व्यापार नेपालमा हुँदै आइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त बजारले ग्राहकलाई सख्त खाँचो रहेको नवीनता प्रदान गर्छ । सोलार, ब्याट्री, फ्युयल सेल र भवन नियन्त्रण प्रणाली लगायत विभिन्न खालका प्रविधिको वृद्धि भइरहेको छ, जसले लागत घटाउने, ग्राहकको लचिलोपना सुधार गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनका लागि तयारी गर्ने लगायतका काम गर्न सक्छन् ।
२. पछाडितर्फ नभई अगाडि उन्मुख नियामक प्रणाली । संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै नेपालमा समेत विद्युतको नियमन ऐतिहासिक रूपमै सुस्त रहेको र त्यसले नवीनतालाई दुरुत्साहित गरेको पाइन्छ । हामीलाई व्यवसायको गतिमा चल्न सक्ने र प्रविधिजन्य परिवर्तनबारे सचेत नियामकहरूको खाँचो छ । चुस्त र लचिलो खाले प्रणालीको लागि जग बसालिएन भने हामी पुरानै र महङ्गो प्रणालीको निर्माण र पुनर्निर्माण मात्र गरिरहनेछौँ ।
३. माग चुलिएको समयमा मात्र केन्द्रित नहुने अनि पहिलेभन्दा चुस्त र लचिलो ग्रिडको आवश्यकता । माग चुलिएको समयका लागि निर्माण गर्दा अरू समयको उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षमता व्यर्थको बन्छ । यस्तो अतिरिक्त पुँजीका लागि धनराशि चाहिन्छ । वितरित ऊर्जालाई ग्रिडको बोटल नेकमा प्रसारित गर्दै, भण्डारण तथा भार व्यवस्थापनका साधन प्रयोग गर्दै र ग्राहकलाई मूल्य सङ्केत प्रदान गर्दै धेरै सुपथ प्रणाली सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
४. पहिलेभन्दा खुला प्रक्रिया । विश्वभरिको उपयोगिता उद्योगलाई भूगोल तथा सरकारी नियमावलीहरूले अन्य पुँजीमा आधारित उद्योगका उत्पदान तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने बजारी शक्तिबाट संरक्षण गरेका छन् । हाम्रो चुनौती र अवसर भनेको भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत उत्पादन गर्दै यस उद्योगलाई नवीनताको त्यसै शक्तिप्रति खुला बनाउने हो, जसले अन्य उद्योगको सुधारमा योगदान गरेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा क्षेत्र लगायतको अर्थतन्त्रभरका प्रवर्तकहरूका लागि लगानी गर्ने वातावरण सही बनाउनुपर्छ ।
१०० वर्षअघि थोमस एडिसनले न्युयोर्कमा पहिलो ग्रिड सुरु गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि नै नेपालमा जलविद्युतको पहिलो संरचना बनेको थियो । तर अब परिवर्तनको समय आएको छ । नेपालको नयाँ संविधान, नयाँ नियामक ढाँचा र उत्पादन तथा प्रसारणका लागि पुँजीमा वृद्धि भएसँगै अब यहाँ परिवर्तन गर्ने समय आएको छ ।आउनुहोस्, एकार्काबाट सिक्ने तरिकाहरूको खोजी गरौँ ।
कफम्यान अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यका गभर्नरको कार्यालयमा उर्जा मामिला हेर्छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०७:२८
मंसिर ४, २०७४ डा. दिनेश धरेल
यो एन्टिबायोटिक्स लेख्ने स्वास्थ्यकर्मी र एन्टिबायोटिक्स खाने वा लगाउने बिरामी मात्रैको सरोकार हैन, हामी सबैको स्वास्थ्यसंँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
नेपालमा एन्टिबायोटिक्स सिफारिस गर्न र किन्न खासै रोकटोक छैन । प्रचलित एन्टिबायोटिक्सले काम नगर्ने किटाणुको संक्रमणले कति जनाको ज्यान जाने गरेको छ भन्ने कुनै प्रकाशित आंँकडा छैन । तर अनुभवको आधारमा समस्याको आयतन ठूलै छ भन्न सकिन्छ । अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा बीस लाख मानिसमा यस्तो संक्रमण हुने गर्छ, जसमध्ये कम्तीमा तेइस हजारको प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो संक्रमणकै कारण मृत्यु हुन्छ । अन्य रोग लागेका बिरामीमा पनि संक्रमण भएर एन्टिबायोटिक्सले काम नगरेर अप्रत्यक्ष मृत्यु हुने संख्या त झन् धेरै छ ।
एन्टिबायोटिक्सले ब्याक्टेरियाको संक्रमण विरुद्ध काम गर्छ । यसले शरीरमा प्रवेश गरेका ती ब्याक्टेरियालाई मार्ने वा वृद्धि हुन नदिने काम गर्छ, जसले गर्दा संक्रमण निको हुन्छ । त्यसैले यो गम्भीर प्रकारका संक्रमणबाट प्राण बचाउने अचुक औषधी हो र आवश्यक परेको बेला एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्नुपर्छ । निमोनिया, पिसाबको संक्रमण, कानको संक्रमण, टन्सिल पाक्ने वा घाउ पाक्ने अनि मेनिन्जाइटिस, सेप्सिसजस्ता गम्भीर संक्रमण धेरैजसो ब्याक्टेरियाले नै गराउने हुँदा एन्टिबायोटिक्सले काम गर्छ । तर भाइरसले गर्ने संक्रमणमा एन्टिबायोटिक्सले कुनै काम गर्दैन । घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने, सिँगान बग्ने, कान दुख्ने, पखाला लाग्ने, ज्वरोसँंगै डाबर आउने जस्ता धेरै समस्या प्राय: भाइरसले गराउने हुन्छ ।
सायद भाइरल संक्रमण भएको बेला एन्टिबायोटिक्स खाएर ठिक भएको सम्झिरहनुभएको होला । वास्तवमा त्यो एन्टिबायोटिक्सले भाइरस मारेर होइन, रोग आफै‌ ठिक भएको हो । धेरैजसो भाइरल संक्रमण शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले आफै नियन्त्रण गर्छ । कुनै–कुनै भाइरस विरुद्ध काम गर्ने एन्टी भाइरल औषधी पनि हुन्छन् । जुन रोगका लागि एन्टिबायोटिक्स उपयुक्त औषधी हैन, त्यस्तो रोग वा समस्यामा एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्दा कुनै फाइदा हुँदैन, बरु हानि हुनसक्छ । आवश्यक नपरिकन एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गरे विभिन्न साइड इफेक्ट देखापर्छन् । धेरैजसो एन्टिबायोटिक्सले मतमत लाग्ने, उल्टी हुने, पखाला लाग्ने, चिलाउने डाबर आउने जस्ता असर देखाउँछन् । कुनै–कुनै एन्टिबायोटिक्सले त गम्भीर खालको एलर्जी गराउँछ । शरीरभरि डाबर आउने, ओँठ र जिब्रो सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेहोश हुनेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
एन्टिबायोटिक्स सबैभन्दा बढी सिफारिस गरिने औषधीमा पर्छ । लगभग पचास प्रतिशत एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग अनावश्यक वा अनुपयुक्त भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै–कुनै एन्टिबायोटिक्स पशुलाई खुवाउने खानामा पनि राखिएको हुन्छ, जुन अनुपयुक्त प्रयोग मानिन्छ । यो प्रस्ट छ कि एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग नै एन्टिबायोटिक्सले काम नगर्ने समस्याको प्रमुख कारण हो ।
जब सामान्यतया प्रयोग गरिने कुनै एन्टिबायोटिक्सले संक्रामक ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्दैन, त्यो गम्भीर कुरा हो । यसले उपचारमा ठूलो चुनौती थपिदिन्छ । एन्टिबायोटिक्सले किन काम गर्न छाड्छ भने यसको जथाभावी प्रयोगले ब्याक्टेरियामा विभिन्न परिवर्तन ल्याइदिन्छ, अनि ब्याक्टेरिया मर्दैन । यसले गर्दा त्यस्तो संक्रमण विरुद्ध अर्को कडा एन्टिबायोटिक्स चलाउनुपर्छ । अझ धेरैजसो एन्टिबायोटिक्सले काम नगर्ने खालको संक्रमण निको पार्न हम्मे–हम्मे भैराखेको छ ।
बाँच्नको लागि ब्याक्टेरियाले जुन गतिमा आफूलाई परिवर्तन गरिरहेको छ, त्यो गतिमा हामीले नयाँ एन्टिबायोटिक्स विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । फेरि त्यस्ता एन्टिबायोटिक्सले मार्न नसक्ने किटाणु अस्पतालमा मात्र सीमित नभएर समुदायमा फैलने क्रम पनि बढ्दो छ । सबैभन्दा ठूलो डर के हो भने कतिपय ब्याक्टेरियालाई उपलब्ध कुनै पनि एन्टिबायोटिक्सले नछुने हुनथालेको छ र बिरामीको उपचार गर्दागर्दै ज्यान पनि जान सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीले एन्टिबायोटिक्स सिफारिस गर्दा धेरै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । सकेसम्म ठोस आधार भएर मात्र संक्रमणको प्रकृति हेरी उपयुक्त खालको एन्टिबायोटिक्स चलाउनु र सिफारिस गरिसकेपछि पूरा मात्रा नछुटाइकन खान लगाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ । एक–दुई दिनमै फेरी–फेरी धेरै थरीका एन्टिबायोटिक्स चलाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसैले दुईपटक सोचेर मात्र एन्टिबायोटिक्स चलाउने र फेर्ने निर्णय लिनुपर्छ ।
एन्टिबायोटिक्स बिरामीले आफूखुसी किनेर खान सक्ने अवस्था रहनु निकै सम्वेदनशील कुरा हो । हेर्दा उस्तै लाग्ने समस्या भए पनि अरू कसैलाई गरिएको वा आफैलाई पहिला गरिएको सिफारिस हेरेर त्यही एन्टिबायोटिक्स आफूखुसी कहिल्यै खानु वा खुवाउनु हुँदैन । ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने वा खोकी लाग्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिक्स खाइहाल्ने गर्दा कुन किटाणुको संक्रमण हो भनेर जाँच गर्न र रोगको सही निदान गर्न गाह्रो हुन्छ । एन्टिबायोटिक्स नखाई ठिक हुन्न भन्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई सिफारिस गर्न दबाब दिनु हितकर हँुदैन । योग्य स्वास्थ्यकर्मीले कुन एन्टिबायोटिक्स कसरी र कहिलेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्छन् र त्यसको पालना गर्न जरुरी छ ।
गम्भीर संक्रमणबाट ज्यान बचाउन एन्टिबायोटिक्सलाई चाहिएको बेला काम गर्नेगरी बचाइराख्नु आजको ठूलो चुनौती हो । यसको सामना मिलेर गर्नुपर्छ । यो समस्या किन भयावह अवस्थामा पुग्दैछ भनेर सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ । समुदाय, स्वास्थ्य संस्था वा पशुपालन लगाएत एन्टिबायोटिक्स प्रयोग हुने जुनसुकै ठाउँमा सरकारी, गैरसरकारी वा नाफामूलक निजी साझेदारहरूसंँग समन्वयको परिपाटी बसाउनुपर्छ । उपयुक्त तरिकाले एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्दाको फाइदा र जथाभावी प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने भयावह समस्याबारे जनस्तरमा सचेतना जगाउन जरुरी भैसकेको छ ।
डा. धरेल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानका उपप्राध्यापक हुन् ।